Mapepa epurasitiki Mabhini, Zvikamu zvekuchengetedza Mabhini, Zvipenga zvepurasitiki - Guanyu
Kupeta Mesh Midziyo
Simbi Yakarembera Racks
Madziro Akaiswa Akavezwa Mapaneru
Akafarira Bench Rack
Yakavhenekerwa Panel Floor Mira
Bin Shelf & Makabati
Waya Kuchengeta Neshelfull Mabhini
Waya Kuchengeta Neshelf Mabhini
Waya Kuchengetera Nekuchengetedza Mabhini
Waya Kuchengetera Trolley Ine Shelfull Mabhini
Waya Yekusheedzera Trolley Ine Masherufu Mabhini
Waya Kuchengetera Ngoro Nekuchengetedza Mabhini
Simbi Yesevha neShelfull Mabhini
Kabineti Ine Shelfull Mabhini
Kabineti Ine Masherufu Mabhini
Ngoro & Madhora
Ngoro Dzesimbi Dzisina Kuchena
Stainless Yakagadziriswa Bata
Bata Inosungika Isingaite
Bhodhoro remvura pallet
Qingdao GUANYU mapurasitiki CO., LTD
Iyo yeNyika Inotungamira Inopa Yekushandisa Kwekubata Uye Yekuchengetedza Solutions.
Bin masherufu, rackings & makabati
Guanyu hwakagadzwa Qingdao muna 1997, akatanga epurasitiki zvigadzirwa Wholesale bhizimisi. Nemakore makumi maviri 'anoramba achiedza uye kuzvipira mukugadzira dhizaini uye yekugadzira zvigadzirwa zvekuchengetedza, kambani yakashandurwa kuita nyika inotungamira mupi wekugadzirisa zvinhu nekuchengetedza mhinduro.
Isu tinopa mhinduro dzakazara dzekuchengetera muzvikamu zvakakosha zvemidziyo yepurasitiki, masherufu uye masisitimu eradhi, mabhini ekuchengetedza, mapurasitiki mapallet, madhora, zvishandiso zvemusangano uye masevhisi eOEM pane ese ese
Makambani eGlobal 500 sarudza Guanyu seshamwari yavo
Shingairira indasitiri yepurasitiki yekuchengetedza pamusoro pemakore makumi maviri nemana
Kuhwina patent 45 uye mashanu aya ekugadzirwa
ISO 9001,14001,45001 yakasimbiswa; SVIRA, ROHS, FDA
Use 100% zvishandiswezve zvinhu zveplastiki.
Mutengi anodzoka Guanyu anogara achitenda kuti kugutsikana kwevatengi kwakakosha sehupenyu. Nhasi, tiri kuteedzera mhando yechigadzirwa cheLiqun Pharmaceuticals. Isu takabvunzurudza vemberi vanoshandisa ...
Nzira yekusarudza mhando tur ...
Bhokisi rekudzoka rinotamba rakakosha basa mune yekuchengetera uye logistics indasitiri. Revhizheni bhokisi rinogona kushandira pamwe chaizvo logistics midziyo uye nzvimbo dzekushandira kubatsira mabhizinesi kukwana t ...
Basa repurasitiki turnove ...
Iwo epamusoro epurasitiki ekudzosera mabhasiketi anonyanya kugadzirwa neyakagadzirwa mbishi zvinhu polypropylene. Izvo hazvina chepfu uye hazvikuvadze uye hazvizosvibisa miriwo. Ivo vanonatswa munguva kuti vachengete ...
Kero: Kwete. 624, Qingshan Road, Qingdao, China
Runhare: + 86-532-87899622
Kuisira Pick Bins, Yakaomeswa Kuchengeta Mabhini, Stack & Hang Mabhini, Yakadzika Mapurasitiki Ekuchengetedza Mabhini, Kuisira Zvokuchengetera Mabhini, Plastiki Kuisira Mabhini,